Baarlamaanka federaalka oo maanta cod aqlabiyad ah ku meelmariyey shuruuc lagu maaraynayo maaliyadda dalka. – Radio Daljir
Baarlamaanka federaalka oo maanta cod aqlabiyad ah ku meelmariyey shuruuc lagu maaraynayo maaliyadda dalka.
Muqdisho, Sept 26 – Mudanayaasha baarlamaanka dawladda federaalka KMG ah ee Soomaaliya ayaa maanta cod-qalabiyadeed ku meelmariyey shuruuc qusaysa xagga maaliyadda iyo lacagaha taasoo saddexdii maalmood ee ugu dambaysay ay ka doodayeen xildhibaannadu.
Fadhiga golaha wakiillada ee maanta oo ay xaadir ku ahaayeen 292 mudane, ayaa hab-dhigaalka sharcigaasi maaliyadda waxaa ogalaatay 290 xildhibaan, halka 2 mudane oo kaliyana ay ka aamuseen sida uu war-fidyeennada u xaqiijiyey ku-xigeenka afhayeenka baarlamaanka Cabdiweli Sh Ibraahim Muuddeey.
Xildhibaanadda ayaa sharcigaan intii aysan meelmarnin ka yeeshay dood aad u kulul oo loo dhadhansan karay in ay ku kala tagganaayeen hab-dhigaalkiisa, waxaan ay mudanayaashu si durugsan uga aragti dhiibteen micnaha fog ee sharcigaani uu xambaarsan yahay, iyagoo is tusaaleeyey faa?idooyinka dawladda iyo dadweynaha uu u soo hoyin doono.
Fadhiga maanta ee mudanayaashu ay ku yeesheen guriga ummadda ee magaalada Muqdisho waxaa goob-joog ka ahaa xubno ka tirsan golaha xukuumadda oo uu ka mid yahay wasiirka maaliyadda , waaxaha hanti dhawrka iyo guddoonka bandgiga dhexe ee dawladda.